प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै सांसद र नेताको प्रश्न भारतसंग झुकेकै हो र ? || सुनौलो नेपाल
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै सांसद र नेताको प्रश्न भारतसंग झुकेकै हो र ?
काठमाडौँ — भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण रोकेर सरकार भारतीय सरकारसामु झुकेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन् । पार्टी संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा उनीहरूले ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएको सरकारबाटै यस्तो निर्णय आउनु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भने सांसदहरूको आलोचनाप्रति आक्रोशित बनेका थिए । उनले फौजी सिपाहीले जस्तै सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिए । एक सांसदका अनुसार सत्तारूढ दलकै नेता तथा सांसदहरूले सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर संसद्, संसदीय समिति र सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश पोखेका थिए । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ।
सरकार र विप्लप बीच कुरो मिल्दै,यी हुन विप्लपसंग बार्ता गर्ने सम्पर्क सुत्र !
मेलम्चीका हाकिम ट्यांकर र मिनिरल वाटरका मालिक, मेलम्ची रोक्नेहरुको यस्तो छ हर्कत
बार्षिक समिक्षा बैठकमा मुख्य सचिवसँग प्रधानमन्त्री रुष्ट